Kooxda Juventus oo dhammaystirtay saxiixa Gonzalo Higuain – Gool FM
Kooxda Juventus oo dhammaystirtay saxiixa Gonzalo Higuain
(Torino) 26 Luuliyo 2016 – Kooxda kubadda cagta Juventus ee Waddanka Talyaaniga ayaa dhammaystirtay saxiixa weeraryahankii Napoli ee Gonzalo Higuain, kaasoo ay kula wareegeen 90 milyan oo euro, sida ay fahansan tahay goal.com, isla markaana ay qorayaan inta badan saxaafadda Talyaaniga.
Weeraryahanka reer Argentine ayaa muddo dheer la la xiriirinayey inuu u dhaqaaqi doono kooxda xafidanaysa horyaalka Serie A, isagoo horay heshiis shaqsi ah horay ula gaaray horraantii bishan July.
28-sano jirkaan ayaa la warinayaa inuu saxiixay heshiis afar sanadood ah oo uu kaga mid noqonayo kooxda Massimiliano Allegri, isagoo ah ciyaaryahan Juventus ah, waxaana usbuucii jeebka loogu shubi doonaa 7 milyan oo euro.
Madaxawanaha kooxda Napoli Aurelio De Laurentiis ayaa u sheegay Juventus inay bixiyaan lacagaha lagu burburin karo qandaraaska Hiaguin, waxaana la sheegay in Juve ay bixiysay lacagahaas.
Qandaraaska ayaana maanta loo diri doonaa xafiiska saraakiisha Horyaalka si heshiiska loo dhammeystiro, Juventus ayaana la sugayaa inay si rasmi ah ugu dhawaaqdo heshiiska Higuain.
Higuain, kaasoo 36 gool dhaliyey 35 kulan oo uu ciyaaray Serie A xilli ciyaareedkii hore ayaa Napoli ku biiray sanadkii 2013, waxaana uu ka mid noqonayaa xiddigaha Miralem Pjanic, Marko Pjaca, Medhi Benatia iyo Dani Alves oo dhammaantood kooxda Turin ka dhisan ku biiray xagaagan.
DEG DEG: Puntland oo RIGOORAYAAL ku qaaday koobka maamul gobleedyada Soomaliya